Fayile isikhalazo malunga nenkundla | Law & More B.V.
Blog » Fayila isikhalazo malunga nenkundla
Fayila isikhalazo malunga nenkundla
Kubalulekile ukuba ube nokugcina ukuzithemba kwiiNkundla. Yiyo loo nto ungasifaka ifayile yesikhalazo ukuba ucinga ukuba inkundla okanye umntu osebenza kwinkundla akakuphathanga kakuhle. Kuya kufuneka uthumele ileta kwibhodi yale nkundla. Kuya kufuneka uyenze le nto ingekapheli unyaka omnye wenzekile.
Umxholo weleta yesikhalazo
Ukuba uziva ngathi awuphathwanga ngendlela obufanele ukwenziwa ngayo ngumsebenzi okanye yijaji yenkundla yomthetho, inkundla yezibheno, iNkundla yeziBheno yezoRhwebo noShishino (i-CBb) okanye iCentral Appeals Tribunal (CRvB), unakho ukufaka isikhalazo. Inokuba kunjalo, umzekelo, ukuba kufuneka ulinde ixesha elide ukufumana impendulo kwileta yakho okanye ekusingatheni ityala lakho. Okanye ukuba uziva ukuba awuphendulwanga ngokufanelekileyo ngumntu omnye okanye nangaphezulu abasebenza enkundleni okanye indlela athe umntu othile kwinkundla wakuthetha nawe. Isikhalazo sinokuba malunga nethoni, amagama okanye uyilo lweeleta okanye malunga nokunganiki ulwazi, ukunika ulwazi emva kwexesha, ukunika ulwazi olungelulo okanye ukunika ulwazi olungaphelelanga. Phantse kuwo onke amatyala, isikhalazo kufuneka sibe malunga nawe. Awunakho ukukhalaza ngendlela inkundla ephathe ngayo omnye umntu; Yinto eyenzelwe loo mntu. Ngaphandle kokuba ufake isikhalazo egameni lomntu onegunya okanye ogcinayo, umzekelo umntwana wakho omncinci okanye umntu ophantsi kweliso lakho.
PHAWULA: Ukuba awuvumelani nesigqibo senkundla okanye isigqibo esithathwe yinkundla ngexesha lokusingathwa kwetyala lakho, awunakho ukufaka isikhalazo ngaso. Oku kufuneka kwenziwe ngenye inkqubo njengokufaka isibheno ngokuchasene nesigqibo.
Ungasifaka isikhalazo sakho enkundleni apho kulindwe ityala lakho. Kuya kufuneka ukwenze oku kungekapheli nonyaka omnye emva kwesehlo eso. Kufuneka usithumele isikhalazo sakho kwibhodi yenkundla echaphazelekayo. Iinkundla ezininzi zikuvumela ukuba ungenise isikhalazo sakho ngokwamanani. Ukwenza njalo, yiya ku-www.rechtspraak.nl nakwikholamu yasekhohlo, phantsi kwesihloko esithi 'kwinkundla', khetha 'Ndinesikhalazo'. Khetha inkundla echaphazelekayo uze ugcwalise iphetshana lesikhalazo ledijithali. Ungayithumela le nkundla enkundleni nge-imeyile okanye ngeposi yesiqhelo. Ungasifaka isikhalazo sakho enkundleni ngokubhaliweyo ngaphandle kwale fomu. Ileta yakho kufuneka ibenolu lwazi lulandelayo:
isebe okanye umntu omangala ngaye;
Isizathu sokuba ukhalaze, kwenzeke ntoni kanye kanye nini;
igama lakho, idilesi kunye nenombolo yomnxeba;
mhlawumbi iikopi zamaxwebhu afanelekileyo kwisikhalazo sakho.
Ukufumana isikhalazo sakho, siza kuqala siqwalasele ukuba ingaba singasetyenzwa na. Ukuba akunjalo, uya kwaziswa ngokukhawuleza. Inokuba kunjalo imeko yokuba isikhalazo sakho luxanduva lomnye umbutho okanye enye inkundla. Kwimeko apho, inkundla iya kuthi, ukuba kunokwenzeka, idlulise isikhalazo sakho kwaye ikwazise malunga noku kuthunyelwa. Ukuba uphantsi kwengcinga yokuba isikhalazo sakho sinokusonjululwa ngokulula, umzekelo ngencoko (yomnxeba), inkundla iya kuqhagamshelana nawe ngokukhawuleza. Ukuba isikhalazo sakho siyaphathwa, inkqubo imi ngolu hlobo lulandelayo:
Ulawulo lwenkundla luya kwazisa umntu (abantu) lowo ukhalaza ngaye;
Ukuba kuyimfuneko, uya kucelwa ukuba unikezele ngolwazi olongezelelweyo malunga nomsitho;
Emva koko, ibhodi yenkundla iqhuba uphando;
Ngokomgaqo, uya kunikwa ithuba lokuqhubeka uchaze isikhalazo sakho kwibhodi yenkundla okanye kwikomiti yokucebisa ngezikhalazo. Umntu ekubhekiswa kuye isikhalazo akasayi kuze asiphathe ngokwakhe isikhalazo;
Okokugqibela, ibhodi yenkundla ithatha isigqibo. Uya kwaziswa ngesi sigqibo ngokubhalelwa. Oku kudla ngokwenziwa kwiveki ezintandathu.
Ngaba unayo nayiphi na imibuzo ngenxa yale bhlog? Ke nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu angakuvuyela ukukucebisa.
Post edlulileyo Ukulawula kwimeko yemozulu ngokuchasene neShell
Post Next Uqhawulo mtshato nabantwana: unxibelelwano ngoyena ndoqo